Ebu Ime, Ọgwụ na ịkpụzi, Plastic Parts Nkedo - Mestech
Akpụzi Ndinam na injection ịkpụzi
MESTECH nwere usoro ọkpụkpọ plastik zuru ezu.
Magburu onwe metal alloy na elu kpọmkwem akụkụ nwere ike nweta.
A ọhụrụ ngwaahịa site na mmalite nke imewe na mmepụta na ahịa.
E nwere ọtụtụ puku ngwaahịa na ahịa, nke a na-emelite kwa ụbọchị.
A na-eme akụkụ plastik site na ịkpụzi ebu na usoro nhazi ndị ọzọ, nke nha na ọrụ na-ezute ihe ndị chọrọ. Enwere ihe karịrị 80% nke akụkụ plastik site na ịkpụzi ọgwụ, nke bụ ụzọ bụ isi iji nweta akụkụ plastik ziri ezi. Ọgwụ plastic akụkụ na ngwaahịa penetrated n'ime akụkụ nile nke mmadụ activit ...
Iji mee nke ọma na imepụta na imepụta ngwaahịa plastik, anyị ga-aghọta ụdị na ojiji nke plastik. Plastic bụ ụdị nnukwu ngwakọta ngwongwo (macrolecules) nke polymerized site na mgbakwunye polymerization ma ọ bụ mmeghachi omume polycondensation na monomer dị ka akụrụngwa. E nwere ọtụtụ ụdị plastik nwere ihe dị iche iche, mana ọ dị mfe ịdị nfe, ...
Plastic Medical igbe (na-akpọ ọgwụ na igbe) ma ọ bụ plastic ọgwụ igbe, na-eji ọtụtụ n'ụlọ ọgwụ na ezinụlọ. Enwere ike iji ya maka ịchekwa ọgwụ, ngwaọrụ ahụike ma ọ bụ buru ha maka ịhụ ndị ọrịa. Igbe ọgwụ, dị ka aha ya na-egosi, bụ akpa maka ịchekwa ọgwụ na akụrụngwa ahụike, nke enwere ike wepụta ma jiri ya mee ihe ...
Site na mmepe nke ụlọ ọrụ nke oge a, e nwere ọtụtụ ihe plastic dị mma. N'otu oge ahụ, a na-ejikwa ngwaahịa plastik eme ihe n'ọtụtụ ụlọ ọrụ dị iche iche. Karịsịa, a na-eji akụkụ plastik ziri ezi karị. Ugbu a, ka anyị kọọrọ gị ndụmọdụ maka nkenke akụkụ plastik. Nhazi ọkwa nke nkenke plastik: 1. Nhazi nke pr ...